जाजरकोट जीप दुर्घटनाप्रकरण: हत्या की दुर्घटना ? – Dullu Khabar
जाजरकोट जीप दुर्घटनाप्रकरण: हत्या की दुर्घटना ?
२३ आश्विन २०७७, शुक्रबार ०४:३२
जाजरकाेट । बुधबार जुनिचाँदे गाउँ कार्यपालिकाको बैठकमा सहभागी हुन गएका वडाध्यक्षसहित जनाको घटनास्थलमै ज्यान गयो भने एक जना बेपत्ता भएका थिए। घाइते नर बहादुर बुढाका छोरा बेपत्ता रहेका लाल बहादुर बुढाको शव बिहीबार फेला परेको छ। घटनास्थलबाट करिव एक किलोमिटर तल उनको शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ।
जुनिचाँदे -१ औलपातिहाल्ना नजिकै दुर्घटना हुँदा जुनिचाँदे गाउँपालिका शोकमग्न भएको छ। गत चैतमा गाउँपालिकाबाट प्रकाशित विज्ञापनअनुसार परीक्षासँगे कार्यपालिका बैठकमा सहभागी हुने उनीहरुको सपना अधुरै रह्यो। सामान्य सडकमा सवारी चालकले ‘ब्याक’ गरेर रहस्यमय तरिकाले मारेको पीडित परिवारको आरोप छ।
गाउँपालिकाले लामो समयपछि परीक्षाको लागि परीक्षार्थी बोलाउने गरेको र बाटोमा मान्छे छानिछानि गाडीमा राखेर मारेको पीडित जुनिचाँदे गाउँपालिका ५ जय बहादुर बस्नेतको आरोप छ। कृषि जेटिए परीक्षाको लागि छोरी बाटोमा जाँदै गर्दा गाडीमा राखेर सबैलाई षड्यन्त्रपूर्वक हत्या भएको उनको आरोप छ। उनले भने , ‘गाउँपालिकाको केन्द्र विवाद थियो। केन्द्रकै विषयमा अध्यक्षलाई फसाईयो। परीक्षाको आश्वासन दिएर कृति बहादुरको गुटलाई माटो बनाईएको छ। गाउँपालिका केन्द्रकै कारण षड्यन्त्रपूर्वक घटना घटाईएको उनको आरोप छ।
जाजरकोट खलंगादेखि जुनिचाँदे ल्याउनको लागि कोठाकोठा गएर जबर्जस्ति किन ल्याईयो मान्छे। कसैको कारण अहिले यसरी ज्यान गयो। ‘ उनले आक्रोश पोखे। यस्तै उकालोमा लागेको गाडीलाई एक्कासी ‘ब्याक’ गरी ड्राइभरले हाम फालेर फरार हुनाले घटना रहस्यमय भएको मृतक कृतिबहादुर शाहीका छोरा बालकृष्ण शाहीले बताए। उनले भने , ‘ पटना हुनुको कारण पक्कै अर्कै छ। यसको सत्य तथ्य छानविन हुनुपर्छ। कसले किन गरेको हो ? औलखोलामा भएको घटना अरु कसैको षड्यन्त्रले घटेको उनले दाबी छ। घटना नियोजित तरिकाले घटेको छ।
केन्द्रको समर्थन नगर्नाले बुवाको हत्या भयो। ‘वडाध्यक्ष अमर बहादुर शाहीको छोरा प्रकाश शाहीले भने। यस्तै घटना षड्यन्त्रपूर्वक भएको भन्दै ३६ घण्टासम्म पनि पीडित परिवारले लास बुझ्न नमानेका थिएनन्। असोज २० गते साँझ खलंगामा एमालेका नेता मार्छ सवारी चालकले भनेको स्थानीय काली बहादुर शाहीले बताए। उनले भने , ‘सवारी चालक गोपाल बस्नेतले राति ११ बजे खलंगाको एक होटलमा जुनिचाँदेका सबै नेता मार्छ भनेको थिए। निरन्तर नारा झडपपछि सहमति भएको छ। बुधवार दिउँसो दुई बजेतिर भएको घटनामा मृतकका परिवारहरुले दोषीलाई कारबाही नभएसम्म आफन्तको लाससमेत नबुझ्ने अडान लिदै आएका थिए।
गाउँपालिकाको केन्द्रको विषयमा पटकपटक विवाद हुँदै आएको थियो। स्थानीय सरकार गठन भएको तीन वर्ष बित्दासमेत स्थानीयको विवादले अहिलेसम्म केन्द्रको टुंगो समेत लागेको छैन। जनप्रतिनिधि सहितको टिम यसरी सकाउने खेल भएको स्थानीय पदम बहादुर बुढाले बताए। पीडित परिवारले घटना शंकास्पद भएकोले तत्काल छानबिनको माग गरेका थिए। घटना भएको ३६ घण्टापछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी, राष्ट्रिय सभा सदस्य लगाएतका उच्चस्तरीय टिम घटनास्थल पुगेका थिए। उच्चस्तरीय टिमले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार पीडित परिवारले शुक्रबार (आज) शव बुझ्ने भएका छन्।
घटनाका पीडित पक्षले षड्यन्त्रपूर्वक घटना घटाईएको आरोप लगाएका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी चेतराज बराललाई माग पत्र बुझाउँदै पीडितका आफन्तले यस्तो माग गरेका हुन्। गाउँपालिका कार्यबाहक अध्यक्षको षड्यन्त्रमा काम भएकोले तत्काल छानबिन सहितको कारबाहीको माग गरिएको छ। कार्यवाहक अध्यक्षसहित ४ जनाको मिलोमतोमा हत्या भएको स्थानीय रेशम शाहीले बताए।
लामो समय केन्द्रको विवादसँगै केही व्यक्तिहरुको षड्यन्त्रमा घटना घटाएकोले भन्दै उनले तत्काल, कारबाहीको माग गरेका थिए। जुनिचाँदे गाउँपालिका जाँदै गरेको जीप दुर्घटनाको छानबिनको लागि उच्चस्तरीय समिति गठन हुनुपर्ने पीडित परिवारको माग छ। न्यायको पखाईमा रहेका पीडित परिवारहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने माग गरेका थिए।
यस्तै सवारी चालकलाई तत्काल नियन्त्रण लिएर आजीवन जेल सजाएको माग गरिएको छ। पीडित पक्ष र स्थानीय प्रशासनको सहमति अनुसार घाइतेको उपचार मृतक परिवारलाई राहतको व्यवस्थापनको लागि माग गरिएको स्थानीय रेशम शाहीले बताए। मृतक अहेवका परिवारलाई आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिको माग गरिएको उनले बताए। चालक गोरख बहादुर बस्नेत अझैसम्म सम्पर्कमा नआएकोले उनको खोजी कार्य जारी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटका प्रहरी प्रमुख किशोर श्रेष्ठले बताए।
पीडित पक्षले बस्नेतको जुनिचाँदे -५ , मटेलामा रहेको घर र छेडागाड -५ , सुवानाउलीमा रहेको घुम्तीमा आगजनी गरेपछि उनका परिवार विचल्ली परेको प्रहरीको भनाई छ। उनको परिवारलाई अहिले ईलाका प्रहरी कार्यालय बडावनमा राखिएको छ। दुई दिनदेखि पानीमा रहेका शव बिहीबार साँझमात्र उद्वार गरिएको थियो। शुक्रबार शवहरुको पटनास्थलमै पोष्टमार्टम गरेर आफन्तलाई जिम्मा दिने प्रहरी प्रमुख श्रेष्ठले बताए।
गाउँपालिकाले आवश्यक जनशक्ति र सामग्री जुटाई घटनास्थलमै पोष्टमार्टम गर्ने भएको छ। परिवार स्रोतको अनुसार अहेव कृष्ण बहादुर शाहीको शव गर्खाकोट, मालिका बस्नेतको सुवानाउली, कर्ण बहादुर शाहीको बडावन र बाँकी ४ जनाको सानाखोलामा संयुक्त रुपमा अन्त्येष्टी गरिने भएको छ। पीडित पक्षले जाहेरी दिए कारबाही गर्ने उनको भनाइ छ।
यस्तै घटनास्थल पुगेका राष्ट्रिय सभा सदस्य माया प्रसाद शर्माले न्याय मर्न नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। घटनास्थलमा पुगेका प्रहरी प्रमुख किशोर श्रेष्ठले घटनाको सत्यतथ्य छानविन गरी पीडितलाई न्याय दिने बताए। प्रहरी निरिक्षक महेश आचार्यको नेतृत्वमा अनुसन्धानको जिम्मा दिएका छौ। घटना भव्यतव्य भन्दा पनि चालकको लापरवाहीले घटेको हो। उनले भने, चालकलाई सम्पर्कमा ल्याई घटनामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई कारवाही गछौं।
बुधबार भएको दुर्घटनामा जुनीचाँदे गाउँपालिका वडा नं.११ का वडाध्यक्ष अमरबहादुर शाही, वडा नं ११ का पूर्व जि.वि.स. सदस्य ६२ वर्षीय कृतिबहादुर शाही, स्वास्थ्यकर्मी ३२ बर्षिय खेमबहादुर शाही, वडान ५ गर्खाकोटका अर्का २९ वर्षिय स्वास्थ्यकर्मी कृष्णबहादुर शाही, मटेलाकी २५ वर्षिया मालिका बस्नेतको ज्यान गएको थियो। सनाखत नभएका एक पुरुषको शव छेडागाड -५ का कर्ण बहादुर शाहीको भएको पुष्टि भएको छ।
जुनीचाँदे ११ महेन्द्र मा.वि.का शिक्षक नवरबहादुर बुढाको थप उपचारको लागि कोहलपुर लगिएको छ। अको टाउकोको चोट सुर्खेतमा उपचार सम्भव नहुँदा थप उपचारको लागि कोहलपुर रिफर गरिएको हो। – भेरीमालिकादैनिकबाट